एक कान दुई कान यौन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
एक कान दुई कान यौन
जेष्ठ ४, २०७६ बालिका थपलिया
काठमाडौँ — आजकाल एउटा विषय-वस्तुले मलाई सताइरहेेको छ, अनि केही सोच्न र लेख्न बाध्य बनाइरहेको छ । त्यो विषय हो- विवाहइतर सम्बन्ध । मेरो छिमेकमा यस्तै घटना भयो । श्रीमान विदेश गएको बेला श्रीमती अर्कै पुरुषसँग नजिक भइन् । यो कुरा घरपरिवार हुँदै विदेशिएका श्रीमानले सम्म थाहा पाए ।
श्रीमान फर्किएपछि उनलाई स्वीकार्न मानेनन् । दुवैको छोडपत्र भयो । श्रीमानले अर्को बिहे गरे । उनी घरपरिवारबाट विछोड भएर एक्लो जीवन बाँचिरहेकी छन् ।
यस्ता घटना खोज्न हामी टाढा जानु पर्दैन । हाम्रै घरपरिवार र समाजको सत्य घटना हो यो । एकछिनको आवेशले हाम्रो जीवनको सबै खुसी तहसनहस गरिदिएको छ ।
हामीलाई थाहा नै छ, हाम्रो देशको धेरै जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश पलायन भएको छ । श्रीमान एकातिर श्रीमती अर्कोतिर । यस्तो अवस्थामा श्रीमानलाई केटी साथी र श्रीमतीलाई केटा साथीको चाहना बढ्न थाल्छ । आफ्नो भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरू सक्रिय बन्न थाल्छन् ।
हुन त विदेशिएका श्रीमतीको परपुरुषसँगको सम्बन्धलाई मात्र विभिन्न सञ्चार माध्यममा हाइलाइट गरिएको छ, तर के ती श्रीमानहरू पत्नीव्रतमा सीमित छन् होला त ? यो प्रश्नले बारम्बार मेरो मस्तिष्कलाई झकझक्याउँछ । अनि आफै जवाफ खोज्न मन लाग्छ, 'पक्का छैनन् ।' उनीहरू पनि आफ्नी श्रीमतीझैं यौनको तिर्खा मेटाउन यत्रतत्र भड्किइरहेका हुन्छन् ।
भनाइ छ : सेक्स भोकजस्तै हो । जसरी भोक लाग्दा हामी खानेकुरा खान्छौँ, त्यसैगरी सेक्स गर्न पाउनु पनि मानव अधिकार हो । यो सृष्टिको जग हो । त्यही सेक्सको अपरिहार्य आवश्यकता पूरा गर्न हाम्रो समाजमा विवाहलाई वैधानिकीकरण गरिएको छ । तर बढ्दो महँगीसँगै दैनिक जीवनका आवश्यकता पूर्ति गर्न पैसाको खोजीमा अधिकांश श्रीमान बाहिरिएका छन् ।
श्रीमतीहरू नानी पढाउने भन्दै सहर पसिरहेका छन् । छोरा-बुहारी सम्झिँदै गाउँमा बुढाबुढी रोइरहेका छन् । श्रीमानले कमाएको पैसा गुटमुट्याएर परपुरुषसँग प्रेमसम्बन्ध गाँसेर मोजमस्ती गर्दै श्रीमतीहरू फरार भइरहेका छन् । अन्तिममा श्रीमानलाई हात लाग्यो शून्य । नत श्रीमती न सम्पति । त्यतिबेला टाउकोमा हात राखेर झोक्राउनु बाहेक श्रीमानसँग अरु उपाय हुँदैन ।
हाम्रो संस्कार अनुसार विवाहित महिला र विवाहित पुरुषले एकअर्कासँग यौनसम्बन्ध राख्नु पापकर्म हो । त्यसैले यो वर्जित छ, हाम्रो कानुनमा । तर लुकिछिपी भए पनि यो सम्बन्धले प्रश्रय पाइरहेको छ । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक भएकाले पुरुष महिलाहरूभन्दा बढी स्वतन्त्र छन् । त्यसैले बहुविवाह गर्दा पनि कसैले औँला उठाउन सकिरहेको छैनन् । यदि श्रीमतीले आफ्नो मनपरेको मान्छेसँग नजिक भएमा मात्र पनि नानाभाँती आरोप लगाइन्छ । घरबाट गलहत्याएर निकालिन्छ । अन्तिममा उनलाई घरको न घाटको बनाइन्छ ।
विश्व इतिहास पल्टाउने हो भने धेरै महान मानिस पनि यस्तो सम्बन्धको अघि झुकेका थिए । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र मोनिका लेविन्सकीको प्रेम प्रसङ्गले एकपटक संसारभर चर्चा पाएको थियो । बिल क्लिन्टन विवाहित थिए । उनी हिलारी क्लिन्टनका श्रीमान थिए । बेलायतकी राजकुमारी डायना पनि यस्तो सम्बन्धमा खप्पिस थिइन् ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्री हिना रब्बानी खार विवाहित र बच्चाकी आमा भए पनि आफूभन्दा १२ वर्ष कान्छा विलावल अली भुट्टोको प्रेममा प“mसेकी थिइन् । विलावलले पनि रब्बानीका लागि आफ्नो बुबा आसिफ अली जर्दारीसँग सम्बन्ध बिगारेका थिए । मर्ने बेलामा पनि हिटलर भर्खरकी प्रेमिकासँग थिए भन्ने उनको जीवनीबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
विवाह अतिरिक्त क्रियाकलापले संसारलाई भित्रभित्रै हल्लाइदिएको छ । विश्व चर्चित रोमान्टिक कवि लर्ड बायरनलाई प्रेम गर्ने अधिकांश विवाहित महिला थिए भन्ने उनको जीवनीमा उल्लेख छ । विवाह अतिरिक्त क्रियाकलापले संसारलाई भित्रभित्रै हल्लाइदिएको छ ।
विवाह-इतर सम्बन्ध चुम्बकझैँ बनेको छ, हाम्रालागि । यसले समस्या निम्त्याउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर पनि जानी-जानीहामी जोखिम मोलेर यो हवनकुण्डमा होमिइरहेका छौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रीमान र श्रीमतीको घरपरिवारमा मात्रनभई स्वदेशमै पनि यो सम्बन्धले उत्कर्ष लिइरहेको छ । हामी यसको जञ्जालबाट उम्किन सकिरहेका छैनौँ ।
मानौँ, यो पहेलिकाको बीचमा हामी घर न घाटका भएरभड्किइरहेका छौँ र सही बाटो पहिल्याउनसकेका छैनौँ । आफू यो अवस्थामा छौँ भन्न पनि हामीलाई हिम्मत छैन र आफ्नो अवस्थालाई गुपचुप राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । हामीले किन नबुझेको होला, वास्तविकता एकदिन छताछुल्ल भएर पोखिन्छ भन्ने ? हामी किन आँखा देख्दादेख्दै पनि दृष्टिविहीन भइरहेका छौं ?कुनै पनि काम गर्नु अघि त्यसको परिणामको बारेमा सोच्नसकेमा हामी आफ्नो धरातलबाट खस्किने थिएनौं कि ?
त्यस्तो सम्बन्ध पो राम्रो जसले कसैको भावनामा ठेस नपुर्‍याओस् । कसैको जिन्दगीसँग खेलवाड नगरोस् । घरबार नबिगारोस् । यस्तो कार्यबाट आउन सक्ने समस्यालाई प्राथमिक तहमै रोकथाम गर्न हाम्रोे गम्भीर सोचले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यो हामीसँग नैसर्गिक रूपमा जोडिएको संवेदनशील विषय हो ।
हामीले लुकाउनुको साटो एकापसमा साटासाट गरेर अन्तरक्रिया, छलफल गरेर केही हदसम्म भए पनि समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ । सडक नाटकको माध्यमबाट गाउँका कुना-कुनामा यसबारे सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ । आफ्नो समस्या नलुकाऊँ । व्यक्तिगत घटना नै सार्वजनिक अर्थात समाजको घटना हो ।
हामीलाई थाहै छ, समाज हाम्रै विस्तारित रूप हो । हाम्रो सकारात्मक कदमले समाजमा शान्ति ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसैले यो शान्तिपि्रय देशमा वैवाहिक अशान्ति छाउन नदिऔँ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७६ ०८:०१
जेष्ठ ४, २०७६ रमेशचन्द्र अधिकारी
धनकुटा — विभागीय टोली एपीएफ क्लबलले शुक्रबार १४ औं संस्करणको सहिद भीमनारायण गोल्डकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । एपीएफको सिजनको यो पहिलो उपाधि हो । अघिल्लो सिजन आधा दर्जन उपाधि जितेको दाउफिन्स यसपल्ट चुकेको छ ।
सहिद भीमनारायण गोल्डकप च्याम्पियन एपीएफका खेलाडी ट्रफीसाथ । एपीएफले फाइनलमा क्यामरुनी टोली दाउफिन्सलाई पेनाल्टी शुटआउटमा ३-२ ले हरायो । तस्बिर : रमेशचन्द्र/कान्तिपुर
तल्लो टुँडिखेलमा भएको फाइनलमा एपीएफले क्यामरुनी टोली दाउफिन्स फुटबल क्लबलाई पेनाल्टी शुटआउटमा ३-२ ले पराजित गर्दै उपाधि कब्जा गरेको हो । दुवैबाट निर्धारित ९० मिनेटको अवधिमा २-२ गोल भएपछि पेनाल्टी शुटआउटमा पुगेको थियो ।
दाउफिन्सका एन्जामा यानिकले हानेको पहिलो पेनाल्टी पोस्ट नजिकबाट बाहिरिएपछि टोली दबाबमा परेको थियो । दाउफिन्सका पेटेंगा र गोलकिपर पि्रसोले मात्र गोल गरे भने मेस्सोवोकले पेनाल्टीलाई एपीएफका गोलकिपर अमृत
चौधरीले बचाए ।
एपीएफका रवि थिङ, हरि कार्की र घनश्याम थारु गोल गर्न सफल भए । तर बुद्धि राईले पेनाल्टी गोलरक्षक पि्रसोले रोकेका थिए ।
निर्धारित समयमा दाउफिन्स पेटेंगाले २३ औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाए । तर केही बेरपछि नै ओको वोटाले पेनाल्टी बक्समा फाउल गरेपछि एपीएफले पेनाल्टी मौका पायो । त्यसमा रवि थिङले गोल गर्दै खेल बराबरी ल्याए । दाउफिन्सका यान्निक ओवानाले गोल थप्दै टिमलाई २-१ को अग्रता दिलाए । तर अन्तिम समयमा एपीएफको तर्फबाट महेश लामाले गोल गरेर फेरि खेल बराबरीमा ल्याएका थिए । त्यसपछि विजेताको छिनोफानो पेनाल्टी शुटआउटमा गरिएको हो ।
विजेता एपीएफले ४ लाख रुपैयाँ र सिल्ड हात पारेको छ । दाउफिन्सले २ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ । म्यान अफ द टुर्नामेन्ट एपीएफका रवि थिङ घोषित भए । उनले २० हजारसहित पदक जिते । डिफेन्समा एपीएफका सरोज कोइराला, गोलकिपरमा अमृत चौधरी र प्रशिक्षकमा सोभित श्रेष्ठ उत्कृष्ट भए । फरवार्डमा दाउफिन्सका यानिक उत्कृष्ट चुनिए ।
विजेतालाई अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्की, प्रदेश सांसद लीला सुब्बालगायतले पुरस्कार तथा ट्रफी प्रदान गरेका थिए ।
सहिद भीमनारायण श्रेष्ठको नाममा २०५५ सालमा स्थापना गरिएको प्रतियोगिता केही वर्ष स्थगित भए पनि २०६३ यता नियमित हुँदै आएको संस्थापक राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७६ ०७:५५